सेनाले बनाउँदैछ छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र, किन ? | Sagarmatha TV
काठमाडौं – पुष ५ को प्रतिनिधीसभा विघटन, त्यसपछिका आन्दोलन र फागुन ११ मा विघटन बदरसंगै देशमा कतिबेला के हुन्छ भन्नेमा टुगों छैन । बदलिदो यीनै राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा नेपाली सेनाले समेत आफ्नो छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र बनाउदै छ । जसले नागरीक आश्चर्यमा मात्र होइन ठुलै घटना हुन लागेको हो भन्ने समेत अड्कल काटिरहेका छन् । यथार्थमा किन बनाउदैछ नेपाली सेनाले छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र ?
नेपाली सेनाले आफ्नो गुप्तचरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म गृहकार्य शुरु गरेको छ । सरकारको आफ्नो छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र हुँदाहुँदै सेनाले किन सैनिक गुप्तचरी सक्रिय बनाउन लाग्यो भन्ने प्रश्नले सबैमा चासो बढेको छ ।
देशको राजनीतिक घटनाक्रम फेरबदलका क्रममा सेनाको नयाँ गुप्तचरी संयन्त्र आउने चर्चाले सर्वत्र संशयसहितको प्रश्न खडा गरेको छ । यस बिषयको प्रश्नमा भने नेपाली सेनाले आफ्नो संस्थाको कार्य सम्पादनका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने भएकोले अन्य संयन्त्रको काममा अन्तरविरोध नहुने बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले सैनिक गुप्तचरी नयाँ, अनौठो विषय नभएकाले प्रत्येक सेनाले आफ्नो अपरेसनल तयारीको लागि नियमित रुपमा गर्ने विषयलाई संकलन गर्न तयार गरीएको बताएको छ ।
सरकारको छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र हुँदाहुँदै सरकार मातहतको सेनाले बनाउने गुप्तचरी संयन्त्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सही सूचना र प्रभावकारी सूचना संयन्त्र सङ्कलन हुने सेनाको दाबी छ । जसमा समयमा नै खतराहरुको आकलन गर्न सकिने र सोही अनुसारको पूर्व तयारीहरु गर्न सकिने सेनाका प्रवक्ता पौड्याले जानकारी दिएका छन् ।
हुनत सबै सङ्गठनको आफ्नो आफ्नो संवैधानिक दायित्व छ । उनीहरुको कार्यको प्रकृति फरक फरक छ । यस्तोमा राज्य संयन्त्रभित्र सूचना सङ्कलन गर्ने निकायसहित गुप्तचरी संयन्त्र पनि छ । तर नेपाली सेना भने सबै सङ्गठनको आफ्नो आफ्नो संवैधानिक दायित्व र फरक फरक कार्यको प्रकृति भएकाले सेनाले पूर्व तयारीकालागि आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गर्न खडा गरेको गुप्तचरी संयन्त्र बनाउन लागेको दाबी गरेको छ ।
यसरी सरकारको आफ्नै छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र हुँदाहुँदै सेनाले सेनाले, सैनिक दृष्टिकोण र सैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नकालागि आफ्नै स्वामित्वको गुप्तचरी संयन्त्र बनाउन लागेको छ । जसबाट सेनाको काममा सहजता हुने सेनाको दाबी छ । तर पछिल्लो समय देशमा बदलिदो राजनैतिक घटनाक्रमका बीच सेनाको छुट्टै गुप्तचरी संस्था बन्ने सुचनासंगै सबै तरंगित बनेका छन् ।